Momba anay - DH Flexo Printing
Niorina voalohany tamin'ny taona 1996, DH Graphic Technology Inc. (antsoina hoe DH) dia orinasa manana teknolojia avo lenta misahana ny R&D, ny fanamboarana, ny fivarotana ary ny fivarotana ny milina fanontana sy ny kojakoja fanontam-pirinty.
Miaraka amin'ny tanjona stratejika amin'ny famokarana milina fanontam-pirinty avo lenta sy ny orinasam-pandraharahana amin'ny tombontsoa amin'ny mpanjifa sy ny mpiasa dia mampitombo hatrany ny fitantanana ny orinasa sy ny fampandrosoana teknika ny DH, ary miezaka ny hanangana "DH" ho marika voalohany amin'ny orinasa fanaovana printy. Hatramin'ny nananganana azy, ny fitakiana ara-toekarena goavana dia mitombo be mandritra ny taona maromaro, ary manamarika ny DH ho marika mitondra any amin'ny orinasa printy sinoa.
Ny DH dia manana fahaiza-manao mahavariana matanjaka.Koa dia manana patanty mihoatra ny 40 izy ary maro hafa koa no miditra amin'ny paikady fangatahana. Ny DH dia nahomby tamin'ny fametrahana milina fanontam-pirinty DH-Kirin sy DH-ROC, karazan-doko printy DH-OFEM CI. Ny vokatra dia mandrakotra ny fampiharana printy toy ny fanontam-pirinty, fonosana fanontam-pirinty vita amin'ny fonosana sy ny famafazana fonosana
Tao amin'ny 2002 dia nanomboka nanao dingana iraisam-pirenena ny DH. DH dia manatrika im-betsaka ny Drupa International Printing Expo sy Labels ExpoEurope. Hatramin'izao, namidy tany Eorôpa, Atsimo ary Amerika Avaratra, Afrika, Azia atsimo atsinanana, Aostralia, Afovoany Atsinanana, Taiwan ary firenena sy distrika hafa ny vokatray.